असार १३ गते, जनकपुर विनोद कुमार महरा आर्थिक रुपमा विपन्न राजु सदाको बुवा अशेश्वर सदालाई तराइ मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलाइन्स) ले आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
थर्ड एलाइन्सका प्रादेशिक संयोजक विनोद महराले घरमै पुगेर अशेश्वर सदालाई नगद दश हजार रुपिया हस्तान्तरण गरेको हो । अशेश्वरको तीन छोरी र एक छोरा थियो । घरको जेठो छोराको मृत्यु भएपछि घर परिवार अपाङग जस्तै भएको छ । आशाको किरण छोरो राजुको निधनले परिवारमा सवै शोकाकुल भइ बसेका छन् ।
सरकारी ऐलानी २ धुर जति घरेरीमा फुसको झुपडी जस्तो घरमा गुजरा गर्दै आएका छन् । घर सानो झुपडी भएकोले सुत्न बस्न र खाना बनाउन ठाउ पुग्दैन । घरको आँगनमा पलास्टीको झुपडी र एउटा मचान(खाट) बनाएर सुत्ने गरेको राजुको आमा निलम देवी सदाले बताइन । छोरीहरुलाई घरमा र आफुहरु बाहिर मचानमा गुजारा गर्दै आएको बताइन ।
घरमा अन्न छैन कसरी क्रिया पनि गर्ने चिन्ता व्यक्त गरिन । छोरोको सम्झना आएपछि भक्कानिए । क्वारेन्टाइनमा छोरो विरामाी भएको थाह पाएपछि गाउँका सवै नेताहरुलाई गुहार लगाइन तर कोइ पनि सुनवाइ गरेन ।
कोरोना होला भनि कसै सहयोग गर्न मानेन । तर कोरोनाको नाम दिएर उचित समयमा सहि उपचार नपाएर राजुको मृत्यु भएकोले न्यायको लागि सवैसँग हार गुहार गरेका छन् । पीडित परिवारले न्याय र क्षतिपुत्र्तिको लागि मानवअधिकारकर्मीहरुसँग समेत आग्रह गरेका छन् ।
घटनाको सत्य तथ्य बुझ्न र पिडित परिवारलाई दुखको घरीमा केही आर्थिक सहयोग होस भनि आज मानवअधिकारकर्मीहरु थर्ड एलाइन्सका कानूनी सल्लाहकार भोगेन्द्र यादव, नेपाल मानवअधिकार संगठन क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं मानवअधिकारकर्म विरेन्द्र कर्ण र अधिकारकर्मी अविनाश साहं समेत मृतक राजु सदाको घर पुगेका थिए ।
मानवअधिकारकर्मीहरु पिडित परिवारको गाउँमा पुग्दा स्थानीय मानिसहरु जम्मा भइ न्यायको लागि पहल गरि दिन समेत आग्रह गरेका थिए । हंसपुर नगरपालिका वडा नं.७ प्रसाही निवासी अशेश्वर सादाको छोरा १६ वर्षीय राजु सदाको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर अन्र्तगत कोरोना अस्पतालको आइसोलेसनमा २०७७ असार ९ गते विहान ३ः०० वजे मृत्यु भएको थियो । अस्पतालले असार ८ गते राजुको अवस्था विग्रपछि पिडित परिवारलाई खवर गरेका थिए ।
क्रिटिकल अवस्थामा इमरजेन्सी भर्ना गरे पनि राजुको ज्यान जोगान सकेन । लाशको पोष्टमार्टम विना पिडित परिवारलाई शव जिम्मा लगाइ चाडै अस्पतालबाट लगे भनि उर्दी जारी गरेपछि पिडित परिवार आफै शव वाहन भाडा लिइ लाश घर लगेका थिए । लाशको असार ९ गते नै अन्त्यष्टी गरेको पिडित परिवारजनले बताए ।
राजु सदामा १६ महिना पहिले रोजगारीको लागि भारतको मद्रास पुगेका थिए । मद्रासमा उनी होटलमा काम गर्थे । कोभिड–१९ का कारण भारत सरकारले लक डाउन गरेपछि होटलहरु बन्द भयो । भारतबाट राजु सदा सहित ९ जनाको समुहमा ०७७ जेठ १४ नेपाल फर्के । उनीहरुलाई हंसपुर नगरपालिका कै नौवाखोर अस्पतालमा क्वारेन्टाइनमा राखियो ।
१४ दिनसम्म क्वारेन्टाइन बसाइपछि ७ जनालाई घर पठाइयो र २ जना ( राजु सदा र अरुण सदा)को आरडिटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएको भन्दै हंसपुर नपाका क्वारेन्टाइनले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पठाइयो । उनीहरुको आइसोलेशनमा राखि उपचार गरिरहेको बताए पनि ०७७ असार ९ गते विहान ३ वजे राजुको मृत्यु भयो । १० दिनपछि २३ जेठमा मात्र आरडिटी टेष्टको लागि नमुना संकलन गरियो । आरडिटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएपनि ५ दिनसम्म त्यही क्वारेन्टाइनमा राखियो ।
राजुलाई पखाला लागेर कमजोर हुदै गयो । पखालाले ग्रस्त भएका राजुलाई अस्पताल लग्न एम्बुलेन्सको समेत व्यवस्था थिएन । नगरपालिकाको टिपरमा राखेर जेठ २९ गते प्रदेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसन पु¥याइयो । रिपोर्ट आएको थिएन तर कोरोना हो भनेर अस्पतालले हेरचाह गर्न छाडिदियो । आइसोलेसनमा राखिएको १० दिनसम्म पनि पिसिआर रिपोर्ट आएको आएन । असार ८ गते बल्ल पिसिआर रिपोर्ट नगेटिभ आयो । तर राजु सिरियस अवस्थामा आइसेकेको थियो ।
पेट दुखेर राजु आइसोलेसनमा ०७७ असार ५ गते तड्पिरहेका थिए । पीडाले राजु तड्पिरहेको, बेडमा अडिन नसकेर उनी भुइँमा पनि छट्पटाइरहेका थिए । सँगै बसेका साथीहरूले ‘राजु, राजु के भयो सोधेर वेडमा उठाएर राखियो ।
तर स्वास्थ्यकर्मी कोही आएन । पिसिआर रिपोर्ट ढिलो आयो तर नगेटिभ नै पुष्टि भयो । उनलाई कोरोना होइन, मेङ्गे इन्फलाइटिक्स भएको कारण राजुको मृत्यु भएको डा. कुलदिप पंडितले बताए ।
लामखुट्टेको टोकाइले लाग्ने रोग हो, कोरोनाको आशंकामा कोभिड अस्पतालमा राखि उपचार गरिएको तर समयमा पिसिआर रिपोर्ट नआएकोले विरामीको अवस्था विग्रेर मृत्यु भएको कोभिड अस्पतालको संयोजक डा. जामुन सिंहले बताए ।
हंसपुर नगरपालिकाले संचालन गरेको क्वारेन्टाइन र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले संचालन गरेको आइसोलेशनको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर रहेको छ ।
तर क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनमा रहेको विरामीहरुलाई पोसिलो खाना, तातो पानी, वेड, मछरथुप वा मछरजाली, बाथरुम, चप्पल, सावुन पानी, सानिटाइजर लगायत सरसफाइ सामग्रीहरु समेत उपलब्ध नहुनुले पनि क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर देखिएको छ ।